Waxabajjii 25, 2020
Biyyoota Laatiin Ameerikaa yokaan Ameerikaa Kibbaa keessatti lakkoobsi namoota vaayirasii Koronaan dhumanii kuma dhibba tokko gahuu isaa irraa kan ka’e, ardittiin addunyaa irratti bakka dhukkubichi itti hammaate haaraa taatee jirti.
Lakkoobsa namoota vaayirasii Koronaan qabamanii miliyoona 1 fi kuma 145 fi 906 Biraaziil Laatiin Ameerikaa sadarkaa tokkoffaa irra jirti. Lakkoobsa namoota vaayirasichaan qabamanii kana keessaa kanneen du’an kuma 52 fi 645.
Akka Yunvarsitiin Joons Hoopkins, kan as Yunaayitid Isteetis keessa jiru akka gabaasetti, lakkoobsa namoota vaayirasichaan qabameetiin, Yunaayitid Isteetisitti aantee sandarkaa lammaffaa irra jirti.
Vaayirasichi Koronaa biyyoota Laatiin Ameerikaa keessatti baay’ee dabaluu isaaf sababaaleen, iyymmaan babal’achuu, akkasumas mootummootaa fi hoogganoota irratti amantaa dhabuu irraa kan ka’e, akeekkachiisa waa’ee vaayirasichaa kennaman salphisanii ilaaluu fi fudhachuu diduu akka tahe dubbatu – xiixaltoonni.
Gama biraatiin Yunaayitid Isteetis, Yunaayitid Isteetis, toora lamaaniinuu jechuun – lakkoobsa namoota vaayirasii Koronaatiin qabamaniitiinis tahe lakkoobsa namoota vaayirasichaan du’aniitiin addunyaa irratti akkuma akkuma sadarkaa tokkoffaa qabattetti jirti. Biyyattii keessatti lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa’e haga ammaatti miliyoona 2 fi kuma 300 yoo tahu, kanneen keessaa namoonni du’an kuma 121 fi 228. Akka gaazzexaan ‘Waashintan Poost’ gabaasetti, kutaaleen Yunaayitid Isteetis lakkoobsa namoota vaayirasichaan qabamanii ol’aanaa qaban, Arizoonaa, Arkansaas, Kaalifoorniyaa, Noorz Kaarolaayinaa, Saawuz Kaarolaayinaa, Tenesii fi Teksaasi.